ဘာကြောင့် ခွေးတွေဟာ လူတွေလောက် အသက်မရှည်တာလဲ? (၆ နှစ်သား ကလေးရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်အဖြေ) - Zet Star
ဘာကြောင့် ခွေးတွေဟာ လူတွေလောက် အသက်မရှည်တာလဲ? (၆ နှစ်သား ကလေးရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်အဖြေ)
August 14, 2020 August 14, 2020 ZCC News	0 Comments
ဘာကြောင့် ခွေးတွေဟာ လူတွေလောက် အသက်မရှည်တာလဲ..?
ဒီမေးခွန်းကို အသက် ၆ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က အံ့အားသင့်ဖွယ်အဖြေ ပေးခဲ့ပါတယ်..။
ကျနော်ဟာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဲလ်ကာ လို့ခေါ်တဲ့ ခွေးတစ်ကောင် အကြီးအကျယ်နေမကောင်းဖြစ်နေခြင်းကို လာရောက်ကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပေးနေတာပါ.. ဘဲလ်ကာဟာ အသက် ၁၀ ခန့်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဝံပုလွေအမဲလိုက်ခွေးအမျိုးအစားပါ.. ခွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ရွန်, ဇနီးဖြစ်သူ လီဆာနဲ့ သူတို့သားငယ်လေး ရှိန်း တို့ဟာ ဘဲလ်ကာကို အလွန်အမင်းသံယောဇဉ်ကြီးကြလေတော့ အခြေအနေပေါ် မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိမလားဆိုတဲ့ စိုးထိတ်မှုနဲ့ စောင့်စားနေကြပါတယ်..
ဘဲလ်ကာကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါ စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့ရှိရတာက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေပြီဆိုတာပါပဲ.. ဒါကြောင့် ဘဲလ်ကာအတွက် ကျနော်တို့ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ မိသားစုဝင်တွေကို အသိပေးပြီး ဒီခွေးအိုလေး ဝေဒနာ သက်သက်သာသာနဲ့ အသက်ထွက်နိုင်စေဖို့ အထောက်အပံ့ ဆေးဝါးနည်းလမ်းကို ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်..
ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အဆုံး ဒီနည်းလမ်းဟာ အသက် ၆ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ သားလေးရှိန်းအတွက် သင်ယူစရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ရွန်နဲ့ လီဆာတို့က ခံစားယုံကြည်ပြီး စီစဉ်စရာရှိတာတွေ ကျနော့်ကို လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်…
နောက်တနေ့မှာတော့ ဘဲလ်ကာ အနီး ဝန်းရံထားတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကြား ကျနော်လည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ နှုတ်ဆွံ့အနေပါတယ်.. ကောင်ကလေး ရှိန်းက ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အလုံးစုံသိနားလည်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ ခွေးအိုလေးကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပွေ့ဖက်ထားတယ်.. ကောင်ကလေး မငိုပါဘူး.. သိပ်တည်ငြိမ်လှတယ်.. မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဘဲလ်ကာဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်..
ကောင်ကလေး ကြည့်ရတာ ဘဲလ်ကာရဲ့ ဘဝကူးပြောင်းမှုအပေါ် အခက်အခဲမရှိ စိတ်အနှောင့်အယှက် အလျဉ်းမရှိဘဲ လက်ခံနိုင်ပုံပါပဲ.. ဘဲလ်ကာ ဆုံးပါးသွားပြီး တခဏမှာ ကျနော်တို့ အတူတကွ ထိုင်ပြီး ခွေးတွေဟာ ဘာကြောင့်များ လူသားတွေထက် အသက်တိုတောင်းရတာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်အကြောင်းအရာကို ပြောဆိုနေမိကြတယ်.. တိတ်တဆိတ် နားထောင်နေတဲ့ ရှိန်းက ရုတ်တရက်ဝင်ပြောတယ်.. ‘ ဘာကြောင့်ဆိုတာ သား သိတယ် ‘ တဲ့..
အံ့အားသင့်မှုနဲ့အတူ ကျနော်တို့မျက်လုံးတွေအားလုံး ရှိန်းဆီ ရောက်သွားတယ်.. အဲဒီနောက် သူ့နှုတ်က ထွက်လာတဲ့ စကားဟာ ကျနော့်ကို အိပ်မက်က လန့်နိုးလာစေသလိုမျိုး တုန်လှုပ်သွားစေပါတယ်.. ဒီထက်ပိုပြီး ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ရှင်းပြချက်မျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မကြားဖူးခဲ့ဘူး.. သူ့စကားဟာ ကျနော့်ဘဝနေထိုင်နည်းကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေတော့တာပါပဲ..
“လူတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ သင်ယူဖို့ မွေးဖွားလာတာပါ.. အချိန်တိုင်းမှာ လူတိုင်းကို မေတ္တာထားရမယ်.. ကောင်းကောင်းဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာတွေပေါ့..”
၆ နှစ်အရွယ်ကောင်ကလေးက ဆက်ပြောပါတယ်.. “ခွေးတွေကတော့ ဒါတွေကို စောစော သင်ယူသိပြီးကြပါပြီ.. ဒါကြောင့် လူတွေလို အကြာကြီး အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ မလိုတာပါ”
ဘဝမှာ တကယ်နေထိုင်တတ်ဖို့ဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတတ်ဖို့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ မေတ္တာထားတတ်ဖို့ လေးလေးနက်နက် ဂရုစိုက်တတ်ဖို့ ကြင်ကြင်နာနာ စကားဆိုတတ်ဖို့တွေပါပဲ..
ခွေးတစ်ကောင်ဟာ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ သင်ယူနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့…
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အသစ်အဆန်းခံစားဖို့ အခွင့်အရေးတွေကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ဘူး.. ခွေးကလေးတွေ ကားလိုက်စီးရတာ ပျော်သလိုပေါ့.. မျက်နှာပေါ် လာနမ်းမယ့် လတ်ဆတ်တဲ့လေနုအေးရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့အတူ လေကောင်းလေသန့်ရှူဖို့ အပြင်လောကကို ထွက်ကြည့်မယ်..
မကြာခဏ တရေးအိပ်စက်မယ်.. အိပ်ရာမထခင် အကြောဆန့်မယ်.. နေ့စဉ် ပြေးမယ်.. မြူးတူးကခုန်မယ်.. ကစားမယ်.. အာရုံစိုက်ခံရခြင်းရဲ့ ခံစားမှုကောင်းရယူရင်း လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်.. ဟိန်းဟောက်လိုက်ဖို့ပဲ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုက်ခြင်းကို ရှောင်မယ်..
ခပ်နွေးနွေးနေ့ရက်တွေမှာ မြက်ခင်းပေါ် လဲလျောင်းခြင်း မလုပ်ဘူး.. ပူပြင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ ရေများများသောက်မယ်.. အရိပ်ရသစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ နေမယ်.. ပျော်ရွှင်တဲ့အခါ တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ယမ်းပြီး ကခုန်မယ်.. အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ခြင်းကရတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမှာ ပျော်ဝင်မယ်.. သစ္စာကို မြဲမြဲမြံမြံ စောင့်သိမယ်..
ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဘယ်တော့မှ ဟန်မဆောင်ဘူး.. ကိုယ်လိုချင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာရှိရင် အဲဒီ့အရာကို မတွေ့မချင်း တူးဖော်ရှာဖွေမယ်.. တစ်စုံတစ်ယောက် စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါ အလိုက်တသိ တိတ်တိတ်လေး နေမယ်.. နဘေးနားထိုင်ပြီး ညင်ညင်သာသာနဲ့ နမ်းရှုံ့ပွတ်သပ်မယ်.. ဒါဟာ ခွေးတစ်ကောင်ဆီကနေ ကျနော်တို့ သင်ယူနိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါမယ်..
သင့်မှာ သစ္စာရှိတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပြီး သူဟာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆို သူ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီစာလေးမျှဝေလိုက်ပါ..။
ဆီလျော်ရာဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (လေးစားစွာဖြင့် မူရင်းရေးသားသူ)
← အဘတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ပြင်ဦးလွင် မြေတဧကကို တရာကျပ်နဲ့ ဝယ်သွားတဲ့ ခရိုနီတယောက်
ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ်က မြန်မာ့လူမျောက် မိသားစု →